Uhie Ohia Red Heeler Dog: Mmetụta, Ọdịdị & Ndị Nzuzo - Reeddịrị
The Red Heeler, ikekwe a maara nke ọma dị ka Australian Cattle Dog, bụ nkịta na-azụ anụ si New South Wales, Australia.
Aha ha 'Heeler' sitere na usoro ha di iche iche nke ichi ehi site n'itinye aka ha.
.B. nkịta mara mma nke ukwuu , puppy puppy ndị a bụ nkịta dịtụ iche na United States, mana, ewu ewu ha na-etolite na-etolite na ha # 56 n'ụwa niile. maka ụdị nkịta kachasị ewu ewu .
Kedu ihe ga-amata gbasara nkịta ehi a? Ebee ka ha si bịa? Olee ụdị mmega ahụ́ ha chọrọ? Olee otú ọ dị mfe ọzụzụ ha? Ebee ka ị nwere ike ịzụta puppy purebred?
Ntuziaka kachasị elu ga-enye gị azịza niile ịchọrọ, gụọ iji chọpụta ihe ndị ọzọ.
Uhie Ohia Dog Red Heeler
Nha 19mụ nwoke 19-20 ″ / mamụ nwanyị 17-19 ″
Ibu ibu 33 ka 45lb
Afọ ndụ 11 - afọ 15
Reeddị Bdị Nlekọta Nkịta
Nzube Hergbọ Ehi
Adabara Ndị okenye ma ọ bụ ndị ọrụ ugbo nọ n'ọrụ
Agba dị iche iche Brown na White nke Na-enye Ọdịdị Uhie
Iwe Onye maara ihe, Obi ike, Agile, Smart, Alert
Aha ndị ọzọ Nkịta Cattle Australia, Nkịta Ehi, Queensland Heeler, Nkịta Ehi Australia
Red Heeler Nkịta
Red Heeler nwa nkita
Red Heeler Ọnọdụ
Nke a Ezigbo Nkịta Ezinaụlọ?
Ilekọta Red Heeler (Nri, Mgbatị & Ọzụzụ)
Red Heeler Agba, Ọdịdị, Uwe na ejiji
Na-azụ Nwa Nkịta Ehi
Red Heeler pụtara na narị afọ nke iri na iteghete mgbe Thomas Hall (onye na-azụ anụ ụlọ si New South Wales, Australia) zụrụ nkịta na-azụ atụrụ ka ha jiri dingos na-arụ ọrụ. imepụta Heelers mbụ .
Ọ kpọrọ nkịta a Halllọ Nzukọ Heelers.
Mgbe ọ nwụrụ, ụdị a ji nwayọọ nwayọọ pụọ, na-adịghịzi maka ịzụta. Agbanyeghị, onye na-akwado ụdị ahụ, Robert Kaleski, batara wee zọpụta ha, na-ede usoro izizi nke amara ama.
Amabeghị mgbe nkịta Cattle Australian bịarutere United States na mbụ, mana, echepụtara na ọ ga-adị ka etiti narị afọ nke 20.
Na A na-amata Red Heeler site na ọtụtụ klọb ndị isi , kemgbe 1893 Heeler esonyela na nhazi anụ ụlọ American Kennel Club.
Nkịta ndị a ka bụ isi eji dị ka nkịta na-arụ ọrụ na ebe ana-achi ehi n’elu uwa; n'agbanyeghị, ha nwere ike ịme anụ ụlọ ezinụlọ mara mma - ọ bụrụhaala na a na-emega ahụ nke ọma.
Ha anaghị enwe mmasị ịnọ n'ụlọ na-enweghị mmega ahụ, kama, ha hụrụ n'anya na-arụsi ọrụ ike (ị nwere ike ịgụkwu banyere nke a na ngalaba mmega anyị n'okpuru).
Red Heeler Puppies, n'ọtụtụ ọnọdụ, amụrụ ọcha dị ọcha. Dị nnọọ ka nkịta Dalmatian na-enweta ntụpọ ya, ụdị a na-eto eto karịa afọ.
Enwere nnukwu mgbanwe na ọnụahịa nkịta ndị a, yana Puppies Red Heeler na-efu ihe ọ bụla n'etiti $ 250 na $ 2,500 USD . Ihe dị iche ọnụahịa a sitere na agbụrụ nne na nna.
Nkịta nna ochie, bụ nkịta nke nwere nne na nna nna nna (nke na-esote ọgbọ anọ ma ọ bụ karịa) ndị niile edebara aha ha na klọb ụlọ.
Ná nkezi, a na-awụba n'oké osimiri ga-enwe n'etiti ụmụ nkịta 5 na 7, mana a ike dam nwere ike inwe 9 pupp na-awụba n'oké osimiri.
A maara ụdị a nwere nsogbu ọmụmụ yana enwere ime ime ụgha n'ime otu ìgwè a.
N'okpuru ebe a bụ eserese na-eto eto maka nwa nkita gị, otu di na nwunye ma ọ bụ n'akụkụ abụghị nnukwu ihe kpatara nchegbu, agbanyeghị, ọ bụrụ na nkịta gị gbakụtara oke ma ọ bụ ibu ibu a tụrụ aro; nleta na vetiran soja nwoke nwere ike ịbụ ezigbo echiche.
Ọnwa isii 14 16 14 17
Ọnwa iri na abụọ 16 27 16 25
Ọnwa iri na asatọ 19 35 18 31
A maara Nkịta Cattle Australia maka nnwere onwe ya na enweghị mmasị, ha abụghị nnukwu onye na-atụgharị uche na sofa.
Agbanyeghị nke a, ha bụ nkịta na-eguzosi ike n'ihe , amaara ya na ichebe oke ehi ha nke ukwuu, nke gụnyere ezinụlọ ha.
Naturallydị ọdịdị ha dị njikere na-eme ka ha ezigbo nkịta nkịta , dịka ha nwere ike ịbụ ndị anaghị eme enyi na ndị bịara abịa. E wezụga ịgwa gị onye ọbịa na ihe onwunwe gị site na obere obere ụlọ, Red Heelers abụghị nnukwu ndị na-ere ahịa.
A maara ndị na-acha ọbara ọbara dị ka nkịta na-ebibi ebumpụta ụwa, nwere ọtụtụ omume na-adịghị mma gụnyere ịkwa ụja, ịta ụta, ịchụ, igwu ala na ịpụ ụkwụ na ikiri ụkwụ.
Omume ndị a nwere ike ịbụ nsonaazụ nke nkwupụta ma ọ bụ na-agwụ ike, yabụ kpachara anya na ị na-eme nkịta gị, ma n'ụzọ anụ ahụ ma n'uche.
Mgbe ike gwụrụ ha, ha nwere ike ịnwa 'ịnụ' ndị ezinụlọ ha, karịchaa ụmụaka.
Nke a mejupụtara imebi ndị mmadụ n'ikiri ụkwụ na ịchụ ha banyere ụlọ ahụ. A pụrụ iji ọzụzụ kwụsị àgwà a na-adịghị mma. Agbanyeghị, Heeler chọrọ ọrụ, ha bụ nkịta na-arụ ọrụ, yabụ na ị gaghị atụ anya ka ha bụrụ nkịta ezinụlọ na-anọ n'ụlọ; enwere ọtụtụ ụdị ezinụlọ dị ukwuu .
Nkịta ndị a na-aka eme nke ọma ma ha na ụmụaka toro eto nọrọ dịka ha nwere agwa ọjọọ nke ịzụ ụmụntakịrị, na-azọ ụkwụ ha.
Nlekọta nkịta dị mma nke ga-aga ogologo oge na nkịta a, karịa nke ahụ, ha anaghị achọ nnukwu mmetụta ịhụnanya.
N'ihi ọdịdị ha na-arụ ọrụ, nkịta Red Heeler anaghị adabara ndị nwe ha anaghị arụ ọrụ.
Ha choro ochichi mmeghari aru iji kpalie ha n'uche na aru ha, nkita ehi ghari ibanye n'ogige gi (mgbe o zuru) ka ha nwee ike meghariri onwe ha.
Kalori 1,000 ruo 1,500
Ezigbo nri ga-adị protein na 18% na abụba 15%.
Mgbe ha bụ nwa nkita, ha nwere elu macronutrient chọrọ; choro protein di 22% na 8% protein n’ime nri ha rue mgbe ha gbara ihe dika onwa abuo.
Dika ha di nkita di ike, ha chọrọ ihe dị ka calorie 30 ruo 35 kwa paụnd nke ịdị arọ ahụ .
Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nwere nkịta na-atụle 40lb, mgbe ahụ nkịta ahụ ga-achọ ihe dị ka calorie 1,200 na 1,400 kwa ụbọchị. Ekwesịrị kewaa ya abụọ ma ọ dịkarịa ala nri abụọ iji belata ihe ize ndụ nke akwa mmiri.
Ndị nkịta na-arụ ọrụ na-eme nke ọma na mmiri mmiri, nri ndị a dị elu na-akwalite mmụba akwara dị mma yana akwa mara mma.
Jide n'aka na ịlele akara na nri nkịta gị, bulie nri n’enweghi mkpuru nri ma nke ahu nwere anu n’ime ato ato ya .
Nke a bụ nkịta nwere mgbatị ahụ dị elu nke ga-achọ ịmega ahụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị obi uto ha site na mmega ahụ ha ga-amalite ime ihe ọchị nke ha n’ụdị agwa adịghị mma, ịta ụja na ịta nri dị otú ahụ.
N'ihi nke a mbanye Red Heeler chọrọ ihe dị ka oge 90 na-emega ahụ kwa ụbọchị .
Nkịta ndị a na-enwe obi ụtọ mgbe ha nwere ọrụ ha ga-arụ, ya mere gbalịa inweta nkịta gị etinye aka na ihe omume dịka flyball ma ọ bụ nrubeisi ọzụzụ.
Mgbe ị na-eme nkịta a, ọ kachasị mma ịdebe ha ogologo oge. Mgbe a hapụrụ ha n'onwe ha, ha nwere ike ịgba ọsọ ọtụtụ kilomita ma ha nwere ike pụọ n'anya, ọ gwụla ma i nwere ncheta dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmega nkịta gị n'ụzọ ọzọ, nke ahụ anaghị agụnye ije ije dị ukwuu, gbalịa ọzụzụ ọzụzụ.
Ndị na-acha uhie uhie na-adịkarị ngwa ngwa ma na-enwu gbaa n'ụkwụ ha, n'ihi ya, nkịta ndị a na-eme nkịta dị egwu.
A maara Red Heelers maka etu ha si azaghachi ọzụzụ.
Mgbe niile na-eguzosi ike n'ihe anu ulo, nkịta ndị a mgbe nile nkọ ịmụta ihe ọhụrụ dị ka nke ọma dị ka ahịhịa elu ochie nkà. N'ihi ihe nketa ha na-arụ ọrụ , nkịta ndị a bụ ndị mmụta ngwa ngwa.
Ha na-ekwu na ị nweghị ike ịkụziri nkịta ochie aghụghọ, ma, yana Australian Cattle Dog nke ahụ abụghị eziokwu!
Nkịta ndị a nwere ọmarịcha ụgbọala maka ịmụ akwụkwọ ma ka nwee ọgụgụ isi na ndụ ha niile.
Na-aza nke ọma na nkwalite dị mma.
Ga ahụta iji usoro ọzụzụ dị ka ịpị clicker ga-aba ezigbo uru. Enwere ike ịnụ ụda nke onye na-pịa ihe n'ofe ụlọ ahụ ma bụrụ akara ngosi doro anya nke omume achọrọ.
N'otu ụzọ ahụ ndị isi na-acha uhie uhie dabara adaba, ha dịkwa mma maka nnwale nrube isi .
Ikike ha nwere ịmụ na ngwa ngwa iji aghụghọ nweta usoro pụtara na ha na-eme ndị mmeri nrube isi nke mbụ mgbe a zụrụ ha nke ọma.
Nkịta a maara na ọ ga - azụlite ọnọdụ a na - ahụkebe na - adịkarịghị ala nke akpọrọ polioencephalomyelopathy; ọnọdụ na - emetụta sistemụ ụjọ nke nkịta, na - ebute ọdịdọ.
Dị ka aha ahụ na-egosi, ọnọdụ a bụ ihe nketa ka enwere ike ịnwale maka ndị nne na nna, ọ bụ ya mere ihe nketa dị ọcha ji dị oke mkpa na ụdị a.
Ha nwekwara ike ibute ọnọdụ dị ụkọ nke a maara dị ka Oesteochondritis Dissecans .
Ọnọdụ mkpali nke mmepe nke na-ebili n'ihi nsogbu cartilage, ebe cartilage na nkwonkwo kewara site na ọkpụkpụ. Nke a nwere ike ịbụ na nkwonkwo ọ bụla dị na ahụ mana a na-ahụkarị ya na ubu.
N'okwu ndị dị nro, enwere ike iji ọgwụ na-achịkwa ha, mana ikpe ndị siri ike ga-achọ ịwa ahụ iji dozie.
Hip dysplasia bụ ihe a na-ahụkarị na ụdị agbụrụ a , ma oburu na eji ha eme ihe.
Nkịta ehi ndị a nwere ohere ịmalite ikpu ìsì, agbanyeghị, nke a nwere ike ịnwe akụkụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ya mere enwere ike ịnwale maka atrophy retinal na-aga n'ihu na ngwaahịa ozuzu.
Nkịta a na-amata ngwa ngwa, ya na ntutu isi ya na-ekesa site na uwe ọcha, na-enye ọdịdị uhie .
Bredị a nwere uwe ogologo, nke siri ike, nke nwere akwa mkpuchi jupụtara na ntutu .
Mgbe ha bụ ụmụ nkịta Red Heelers na-acha ọcha na ntutu isi ha na-eto eto oge iji nye ha mbinye aka ha 'acha ọbara ọbara'.
Nweta Blue Heelers, ndị nwere uwe ọcha na-acha ọcha, na-enye ha ọdịdị na-acha anụnụ anụnụ.
Nkịta ndị a bụ mara maka njiri mara nwayọ ha , nke akwara, nke ewuru nke ọma. Ha nwere ntị nwere okpukpu atọ, ihu na-acha na ntutu na ọdụ ọdụ.
Mgbe ụfọdụ, ọdụ ọdụ ya na-akwụsị ma ọ bụrụ na anụmanụ na-arụ ọrụ iji nyere aka gbochie ihe ọghọm.
Nkịta ndị a abụghị ndị na-ebupụ kwa afọ, kama ịnwe “afụ” kwa afọ ebe uwe a na-enwe n'afọ na-abata na-eme ka uwe ọzọ dapụ.
Mụ nwoke na-afụ uwe ha otu ugboro kwa afọ, ụmụ nwanyị na-afụkwa uwe ha ugboro abụọ kwa afọ, na-abụkarị usoro okpomọkụ ha.
Nkịta ndị a anaghị achọkarị nkenke. Ha nwere ike chọọ ịsa ahụ mgbe ụfọdụ mgbe ha na-agagharị n'ime apịtị mana gafere nke ahụ, ha nwere uwe dị mfe impeccably iji kwado.
Nkịta a ga-anọgide na-eguzosi ike n'ihe nye ndụ ha niile, na-ahụghị ihe ọ bụla n'anya ka ị na-arụ ọrụ n'akụkụ gị.
Isi ihe na-eme ka ha nwee obi ụtọ bụ mmega ahụ na ịrụ ọrụ, ebe Red Heeler anaghị eme nke ọma na-agwụ ike, ha kwesịrị ịnọ n'èzí na-arụ ọrụ iji nwee afọ ojuju na ndụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ maka nkịta na-azụ anụ , mgbe ahụ, nke a bụ nnukwu nkịta.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bi n'obodo ahụ ma ọ bụ na ị na-achọ nkịta ezinụlọ ma ịnweghị oge ịrara oge nhazi oge nke nkịta a, mgbe ahụ ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ ụdị mmezi dị ala.
You nwere Red Heeler n'ụlọ? Na-eche echiche inweta otu? Naanị onye na-akwado ìgwè ahụ? Gwa anyị echiche gị banyere nkịta a dị ịtụnanya na nkwupụta.
shih tzu na maltese mix
border collie Australian onye ọzụzụ atụrụ mix ụmụ nkịta
zuru oke nkuzi nkuzi french bulldog
ego ole ka nkuzi chihuahuas na -eri
aha mara mma maka nkịta ọcha
aha ndị pụtara wolf ọcha